Seteembar | 2013 | marqaati
Arkiifiyaha Billaha: Seteembar 2013
Qiimeeynta Heerka Qatarta Musuqmaasuqeed ee Wazaarada Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka
Musuqmaasuq – oo u taagan ku tumashada awood leysku aaminay si faaido gaar ahaaneed loo gaaro – baa si aad ah loo aaminsanyahay in ay ka jidho Soomaaliya halkaani oo Qarumaha Midoobay marar badan sheegay in madaxda dawlada ay lunsadeen lacago aad u fara badan.
Si loo ogaado asalka dhibaatada musuqmaasuqa ee dawlada dhexe baa hay’ada marqaati qaaday baaritaan ku aadan Heerka Qatarta Musuqmaasuqa ee wazaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka.
Wazaaradaan waxaa loo doortay sababtoo ah waa mida ugu weyn ee hoos yimaadaan booliska, nabad sugida, iyo hogaanka socdaalka. Sidaasi darteed waa mid ka mid ah wazaaradaha ugu weyn muujinta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa wazaaradaan waa mid muhiim u ah muwaadinka.
Ula jeedada baaritaankaan waa laba: mida koowaad waa in la ogaado qeybaha iyo qaab shaqooyinka u nugul musuqmaasuqa, mida labaad waa in marki la ogaado tan koowaad in la diyaariyo mashaariic lagula dagaalamo arrimaha keeni kara musuqmaasuqa ee ka jira wazaaradaan iyo kuwa kaleba.
Waxaan isticmaalnay qaab baaritaan lagu qiimeeyo heerka qatarta musuqmaasuqed oo aay diyaarisay hay’ada Project Against Corruption in Albania (PACA) 2010ki kaasi oo ku mudan xaalada nabadgalyo taasi oo hay’adaani marqaati ku hawlgasho.
Shaqaale ka tirsan wazaarada iyo labo qofood oo la xiriira wazaarada baa loo doortay in ay ka qeyb galaan dood wadaag. Dood wadaagaasi inti lagu guda jiray baa hay’adaani marqaati weydiisay 75 suaalo lagu qiimeeynayo heerka qatarta musuqmaasuqa wazaaradaani (eeg Appendix 1 ee hoos ku xusan). Doodi kooxda la doortay baa lagu gaaray jawaab laysku raacsanyahay ee su’aal walba. Jawaabaha aysan aqoon si cad baa loo xusay, kuwa aanan quseynine waxaa lagu xusay M/Q oo u taagan “ma quseeya”.
Su’aalihi la weydiiyay ee ahaa 75ka, 12 ma aysan aqoon jawabtoda, 10na ma quseyn, si cad baana loo xusay. Sidaasi daraadeed, 53 suaal baa laga jawaabay kuwaasi oo sawir buuxa inaga siinaya heerka iyo dhacdooyinka musuqmaasuqa lagu arkay wazaaradan.
Su’aalaha muhiimka ahaa waa la helay jawabtooda kuwaasi oo taabanayay siyaasada la dagaalanka musuqmaasuqa, furfurnaanta, iyo la xisaabtanka ee wazaarada arrimaha gudaha iyo amniga qaranka.
Marki la ogaaday arrimaha qatarta musuqmaasuqa keeni kara ee ka dhex jira wazaarada baa hay’adda marqaati guda gashay baaritaan ku aadan hadi aay jiraan musuqmaasuq ay keeneen arrimaha la ogaaday in ay fududeey karaan in uu dhaco musuqmaasuq.
Waxaan baarnay keydka maaliyada si aan u ogaano hadii uu jiro wax is daba marin maaliyadeed. Waxaa kaloo laga xaqiijiyay macluumadki laga helay shaqalihi hore shaqaale kale ee wazaarada ka tirsan kuwaasi oo qeybo kale ka shaqeeya.
Xaqiijinta macluumaadka aan helno baa aad u adkaa sababtoo ah dadka macluumaadka ina siinaya baa ka laba labeeynayay in ay inoo xaqiijiyaan macluumaadka aan heesano iyagoo ka baqayo aar gudasho. Maadaama aanan helin dad wax badan inoo xaqiijiya baa warbixintaan ka reebnay dhacdooyin badan ee musuqmaasuq ahi kaasi oonan helin cid inoo xaqiijisa. Sidaasi oo ay tahay, waan baari doonaa mustaqbalka hadii ay inoo suura gasho.
In kastoo aanan dhacdo walbo halkaan ku xusi doonin, hadane qatarada la ogaaday baa aad u badan una baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
Arrimaha keeni kara musuqmaasuqa ee lagu arkay Wazaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka
Wazaarada malahan shuruuc hoosaad ee la dagaalama musuqmaasuqa:
Malahan qeyb la dagaalanta musuqmaasuqa
Ma jiraan wadooyin lagu soo sheego musuqmaasuq wazaarada ka dhex dhaca
Ma jiraan qaab dadweynaha ku soo dacweyn karaan shaqaalaha wazaarada
Waxaa jira Qeybta Koormeerka lakin shaqaalaha wazaarada waxay sheegeen in aysan hawl galin.
Shaqaalaha wazaarada kuma faraxsana shaqadooda waxayna ka cabanayaan xubnaha ugu sarsare wazaarada kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay u mudax banaanyihiin maaliyada wazaarada oo siday rabaan ka yeelaan
Wazaarada wax badan lama socodsiiso muwaadiniinta, taasi oo heerka qatarta musuqmaasuqa aad u kororsiineysa.
Qaar badan oo shaqaalaha ahi ma oga xitaa shaqada laga rabo waxayna shaqo ku heleen qof ay yaqaanaan awgeed.
Wazaarada in kastoo muwaadiniinta la fal gasho, malahan qeyb ay muwaadiniinta ku soo dacwey karaan shaqaalaheeda, taasi oo kororineeysa qatarta musuqmaasuqa.
Shaqaalaha wazaarada waxay sheegayaan in Hogaanka Socdaalka iyo Barnamijki dhaqan celinta ciidanki Shabaab ka soo gostay ay yihiin labada meelood oo ugu nugul in musuqmaasuq uu ka dhaco.
Wazaarada marki ay wax iibsaneyso cidi ay doonto bay wax ka iibsataa oo lama dalbado in sharikadaha u tartamaan
Ma jiraan shuruuc la ogyahay oo la raaco marki la shaqaaleeynayo shaqaalaha wazaarada
Lagama rabo shaqaalaha in ay sheegaan inta maal ay leeyihiin ka hor inta aysan shaqada qaban
Lacagaha ay isticmaasho wazaarada iyo qaabka ay u isticmaasho waa la qariyaa
Ma jiraan shurruc hoosaad ee akhlaaqda ku saabsan oo qoran ay ka warhayaan shaqaalaha wazaarada
Shaqaalaha kuma faraxsana shaqadooda mana dareensana in ay u tababaranyihiin dhibaatooyinka ay la kulmaan.
Dhacdooyin Musuqmaasuq ee lagu arkay wazaaradu
Ma jiraan shuruuc la ogyahay oo la raaco marki la shaqaaleeynayo shaqaalaha wazaarada. Arrintan ayaa muuqata in si aad ah loogu tuntay taasi oo keentay in la shaqaaleeyo dad aanan u qalmin ama qibrad u laheyn shaqooyinka loo dhiibay. Tusaale ahaan, waziirka ina adeerkiis, Cawil Wehliye, baa ah liaisonka booliska u jooga UN-ka. Wuxuu kaloo saameyn badan ku leeyahay wazaaradu maadaama ay waziirka yihiin ilma adeer. Sidoo kale, waxaa qeybo muhiim ah ee wazaarada loo dhiibay niman ay waziirku isku fiicanyihiin sida Xuseen Cabdi Aadan oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee wazaaradan, taasi oo ah “Nin Jacleysi” waana mid kamid ah qeybaha musuqmaasuqa uu u kala baxo.
Hal bil oo sandkaan ah baa madaxa maaliyada wazaaradan kala baxay bangiga dawlada lacag dhan 23,500 oo doolar taasi oo ah lacago isaga uu u bixinayo siduu doono kana baxsan lacagaha nus milyanka doolar ka badan ee si toos ah bishaasi loogu wareejiyay akoonka wazaarada.
Baaritaanada horudhaca ahi waxeey muujinayaan in Hogaanka Socdaalka uu lacago kala baxo bangiga dhexe iyagoon waxba soo galinin inkastoo lacago fara badan ay ka qaataan muwaadiniinta marki ay baasaboorada u soo saaraan. Tani waxay muujinaysaa in dadki warka ina siiyay ay ku saxsanaayeen qiimeeyntooda aheyd in Hogaanka Socdaalka uu aad u sareeyo heerkiisa qatarta musuqmaasuqeed.
Waxaa loo baahanyahay in baaritaano dheeraad ahi lagu sameeyo arrimaha la cadeeyay ee hada horudhac ahaan muujiyay in qaab dhismeedka wazaaradu sahlayo musuqmaasuq hadane la arkay dhawr dhacdo muujinaya wax is daba marin.
Aad bay u sareysaa qatarta in musuqmaasuq balaadhan uu ka dhaco wazaaradaani sababtoo ah waxaa jiro furfurnaan la’aan xaga macluumaadka, xuriyad maaliyadeed ee madaxda sare, iyo lahaansho la’aanta wazaaradan ee siyaasad ka hor tagta musuqmaasuqa.
Talooyinkan hoos ku xusan bay marqaati soo jeedineysaa in lagula dagaalamo qatarta musuqmaasuqa ka dhici kara wazaaradaan iyo kuwa kaleba:
In la sameeyo lana hawlgaliyo guddiga madaxa banana ee la dagaalanka musuqmaasuqa sida ku xusan dastuurka Somaliya Qodobka 111C.
In la sameeyo lana hawlgaliyo qeyb la dagaalanta musuqmaasuqa wazaaradan dhexdeeda iyo wazaaradaha kaleba.
In la siiyo shaqaalaha wazaarada tababar ku aadan akhlaaqda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si looga hor tago in musuqmaasuq uu dhaco.
In la baaro sida ay u soo gasho iyo sida ay u isticmaalaan lacagaha dhamaan wazaaradaha iyo laamaha dawlada. Baarlamanka dawlada dhexe waa in uu sharci tani waajib ka dhigaya soo saaro.
In la dhaqan galiyo Qodobka 32 ee dastuurka Somaliya kaasi oo dhigaya in shaqsi walba uu xaq u leeyahay in uu helo macluumaadka ay hayso dawlada. In taasi waxaa dheer, Baarlamanka dhexe waa in uu sharci xoojinayo sharciga kor ku xusan soo saaro si loo xoojiyo dawlad furnaanta sida ku qeexan Schedule Kow (C) ee dastuurka.
Baarlamaanka dhexe waa in uu sharci waajib ka dhigaya in dadka xafiis dawladeed qabanayaan ee cadeeyaan lacagaha ay haystaan kahor inteyan xilka qaban iyo kadib marki ay ka degaan xilka soo saaraa si loola dagaalamo ku tagri falida hantida umada.
In khadka internetka ahi lagu daabaco miisaaniyadaha wazaaradaha, lacagaha soo galo, iyo sideey ku baxaan si loola xisaabtamo hada iyo mustaqbalkaba.
Waxaan ugu yeereynaa dhamaan dadka iyo hay’adaha nagu aragtida ahi in ay nagala shaqeeyaan sidii soo jeedinteena loogu dadaali lahaa in ay dhaqan galaan.
A.Shaqada Hay’ada la baarayo
1.Waa maxay shaqada ugu muhiimsan ee hay’ada? Waa Wazaarad.
2.. Wazaarada ma leedahay warbixin cadeyneysa shaqadeeda? Shaqaalaha ma ka warqabaan? Shaqaalaha ma aaminsanyihiin in ay run tahay? Maya shaqaalaha ma arag meel ay ku qorantahay lakin waxay leyihin waan ka war qabnaa shaqadeena.
3.Qeybaha wazaarada ma leeyihiin shaqooyin cad ee qeexan? Shaqaalaha ma ka warqabaan? Shaqaalaha ma aaminsanyihiin in ay runtahay? Maya kama war qabaan shaqaalaha in ay jidho lakin waxey aaminsanyihiin in ay shaqadooda ogyihiin.
4. Dhamaan shaqaalaha wazaarada ma leeyihiin shaqooyin cad iyo meelo lagu hagaagi karo qeexitaanka shaqadooda? Maya.
5. Waa meeqo miisaaniyada wazaarada? Lama Oga
6. Lacagaha side loo isticmaalaa marki loo kala qeybiyo mushaaraadka, maal gashiga, wax iibsiga, iwm? Lama Oga
7.Waa meeqa lacagta dhexdhexaadka ahi ee wazaaradu wax ku soo iibsato? Ma jiraan maal gashi ama wax soo iibsi weynaa ee wazaaradu gashay sanadkaan ama kii hore? Lama Oga
8. Waa boqolkiiba meeqa inta wax ay wazaarada soo iibsatay ee tartan lagu kala baxayo loo qabtay ee la siiyay cidi guuleeysata? Waxba
9. Sidee uu dhib badantahay farsamo ahaan go’aamada lagu gaaro lacag qaadashada ee wazaaradu? Yaa gaara go’aamada adag ee lacag bixinta siduuna ku gaaraa? Waxaa go’aamada gaara waziirka, agaasimaha guude, iyo madaxa qeybta maaliyada ee wazaaradu. Waziirku wuxuu u diraa cidi lacag weydiisata isaga madaxa maaliyada.
10. Go’aamada waxyaabada waaweyn lagu iibsanayo ma waxey u baahanyihiin saxiixa madaxda sare ama uma baahna? Waxey u baahantahay saxiixa madaxda sare
11.Go’aamada waxyaabada yaryar lagu iibsanayo ma waxey u baahanyihiin saxiixa madaxda sare ama uma baahna? Uma baahna.
12. Wazaarada maka heshaa lacago dadweynaha sida canshuur iwm? Sidee lacagahaas lagu keydiyaa lagulana socdaa? Qaabkee lacagahaas loo qaadaa? Wazaaradu baasaboorada bay soo saartaa oo dadweynaha lacago looga qaadaa shaqadaasi. Lacagaha akoonka hogaanka socdaalka baa la galiyaa. Waxaa la aaminsanyahay in lacagtaasi aysan yareyn, mana aanan arag iyada oo bangiga dhexe ee dawlada lacagahaasi loo sii gudbinayo.
C. Maareynta Shaqaalaha
13. Meeqo qof baa wazaaradu ka shaqaysa? Lama oga
14. Meeqa ka mid ah shaqaalaha baa toos loo shaqaaleeyay iyo meeqo ayaa si aan toos aheyn loo shaqaaleeyay? Lama oga
15. Boqolkiiba meeqo ee katirsan qeybaha soo socdo baa ah shaqaale joogto ah, meeqo ayaa baroobo hal sano ku jira, iyo meeqo baa kontaraat gaaban ku jira?
b. Xoghaya Guud
t. Agaasimayaasha qeybaha ama agaasimaha guud
j. Agaasimayaasha hogaanada
16. Ma jiraan baaritaan ama xisaabaad ku saabsan shaqaalaha imaashiyadooda shaqada? Hadii ay haa tahay, ma waxaa loo arkaa in ay badantahay, yartahay, ama iska caadi? Haa way jirtaa; shaqaalaha si aad ah bay shaqada u soo xaadiraan.
17. Ma jiraan sharci hoosaad qeexaya qaabka dadka loo shaqaaleeysiinayo? Maya
18. Boqolkiiba meeqa baa dadka ay soo xushay guddiga shaqaaleynta la shaqaaleyn? Guddi shaqaaleeyn kama jiro wazaarada.
19. Marki la shaqaaleeynayo shaqaale xilal qatar u ah in musuqmaasuq ka dhacaan, ma jiraan waxyaabo la eegayo si loo hubiyo in shaqaalaha cusub uu aamin yahay? Maya
20. Marki dad soo dalbadaan shaqo, mala su’aalaa si loo hubiyo in aysan laheyn dano gaar ah oo ka hor imaanaya in ay qabtaan ama in ay si wanaagsan u qabtaan shaqadooda? Maya
21. Shaqaalaha ma ka war qabaan xaaladaha noqonayo khilaafka danaha shaqada iyo danaha gaar ahaaneed? Maya
22. Shaqaalaha cusub tababar mala siiyaa marki la shaqaaleeyo? Maya
23. Hadii ay haa tahay, tababarkaa ma ku jidhaa mid taabanayo akhlaaqda iyo aaminaada? Taba barkaan mar labaad miyaa la siiyaa marki la dalacsiinayo? M/Q
24. Shaqaalaha ma u haystaan in tababarka ay haystaan uu ku filanyahay si ay u maareeyaan arrimaha la soo darsa? Maya
25. Yaa u magacaaban in shaqaalaha ula tagaan arrimaha la sii darsa mise shaqaalaha kale bay ula tagaan arrimaha la soo darso? Shaqaalaha kama war qabaan qof u magacaaban arintaas
26. Shaqaalaha mushaaraadkooda ma aaminsanyihiin in ay si wanaagsan ugu filantahay, ku filantahay uun, ama ku yartahay si ay nolol macquul ah ku noolaadaan? Waxay aaminsanyihiin in ay ku filantahay uun
27. Shaqaalaha heerkee ayay dareemayaan in uu qiimeeyo i) wazaaradu, ii) madaxdooda sare, shaqada ay hayaan? Ma dareensana in ay qiimeeyso wazaarada ama madaxdooda sare
D. Nidaamka iyo go’aan gaarida
28. Wazaaradu ma sameysaa mid kamid ah inta hoos ku xusan?
b. Soo saarida baasaboorada ama shatiyada Haa
t. Shacabka miyay siisaa cayr? Maya
j. Ma waxay bixisaa lacago lagu dhimayo qiimaha badeecooyink? Maya
x. Shacabka miyeey lacago ka heshaa sida canshuuraad ama lacag sharciyeysan ee shaqo shacabka loogu qabanayo Haa
29. Ma jiraan qaab cad iyo doorasho sidi lacagtaas loo isticmaalayo iyo sidii loo qaado lacagahaa Lama oga
30. Xagee laga heli karaa meel ay ku qorantahay shuruuc hoosaadkaa? Lama oga
31. Marki go’aanka ugu dambeynta ay gaari karaan saraakiisha goobta ku sugan, ma waxaa jira shuruuc hoosaad la raacayo sidii go’aamadaa oo kale lagu gaari lahaa? Maya
32. Hadii aanan go’aan la gaarin oo hadane la dhaafo xiligii loogu tala galay, arrinta xalinteeda muwaadinka miyaa loo xagliyaa? Maya
33. Bixinta waxyaabaha sida baasaboorada ama shatiyada ma waxaa laga bixiyaa hal xafiis si ayan muwaadiniintu u aadin dhawr xafiis? Haa
34. Ma waxaa jira dhawr goobood oo waxyaalaha kor ku xusan lagu bixiyo? Waa hal
35. Wazaaradu ma leedahay shuruuc hoosaad cad oo qeexaya qaabka iyo sida loo keydinayo feylesha wazaaradu? Malahan waxaas oo kale oo ay ka warwabaan shaqaaluhu.
36. Go’aamada wazaarada mid mid miyaa loo keydiyaa iyada oo la raacayo nidaam cad ee la ogyahay? Go’aamada .
37. Yaa waayay cida heli karta feyleshaan, yaa waayay cida wax ka bedeli karta? Shaqsi gooni ah ee saasi yeeli kara ma jiro
38. Waa maxay heerka uu aarsiisanyahay furfurnaanta wazaarada eek u aadan feylesha gacanteeda ku jidho. Waa maxay feyleshu ay caam ahaan u fasaxaan iyo kuwa ay bixiso marki la weeydiiyo? Wazaaradu ma furfurna oo warbixino lama wadaagto muwaadiniinta iyada oo ku andcooneeysa arrimo amaan/
39. Wazaaradu ma leedahay siyaasad rasmi ah oo ku aadan qeybinta macluumadka? Tan ma ka qeybtahay warbixino la qeybiyo iyada oonan la codsan oo u kala baxsan:
b. Qaab dhismeedka wazaarada iyo dadka lala soo xiriiri karo
t. Siyaasada wazaarada iyo feylesheeda
j. Sharciyada iyo shuruuc hoosaadka
x. Sharci la diyaarinayo
kh. Qaab shaqooyin muhiim u ah muwaadiniinta sida kuwa lagu xusay qeybta kore D.
Dhamaan waa maya
G. Helida macluumaadka
40. Wazaaradu ma leedahay sarkaal oo si cad ugu mugacaaban in uu ka jawaabo weydiisashada muwaadiniinta macluumaad sida uu dastuurka xaqaas u siinayo? Maya
41. Meeqo jeer baa wazaarada la weydiiyay macluumaad sanadkii hore? M/Q
42. Meeqo dalabaad baa la diiday ama hada dood ka taagantahay? M/Q
H. Shuruucda sugaya amaanada iyo akhlaaqda
43. Wazaarada ma leedahay shuruuc hoosaad sharaxaya shaqaalaha qaabka laga rabo in uu u shaqeeyo ama akhlaaqda laga rabo? Hadii uu leeyahay, shaqaalaha kama warqabaan.
44. Shaqaalaha ma loo sheegaa jiritaanka shuruuc hoosaadka marki shaqo loo dhiibayo? Maya
45. Meeqo jeer baa shaqaalaha la siiyaa tababar ku aadan akhlaaqda? Qaar waa la siiyay qaarna lama siin tababar, kuwa la siiyayne hal jeer ka badan lama siin.
46. Shaqaalaha si wanaagsan ma u yaqaanaan shurucdaan? Sidee loo xaqiijiyaa in ay bartaan shuruucdan? Maya, kama war qabaan shuruucdan.
47. Ma jiraa shuruuc ama dokumenti kale oo u sharxaya shaqaalaha sida laga rabo in ay u dhaqmaan haduu yimaado iska hor imaad xaga danahooda gaarka ah iyo kan wazaarada? Maya
I. La Xisaabtanka
48. Shaqaalaha ma leeyihiin wadooyin si cad loo qeexay oo ay ula socodsiiyaan madaxdooda shaqada ay qabteen ama go’aamo ay gaareen? Maya
49. Ma jiraa qeyb kormeer oo ay wazaaradu leedahay? Haa laakin waxaa lagu qiimeeyay in uusan shaqeyn.
50. Meeqo kormeer buu qabtay sanadki hore? Lama oga
51. Ma jirtaa qeyb qiimeynta gudaha? Haa, lakin sidoo kale shaqadeeda kama soo baxdo sida ay aaminsanyihiin dadka dood wadaaga ka qeybgalay.
52. Waa maxay wax yaabaha ugu muhiimsan ay qeybta kor ku xusan aragtay sanadki hore? Lama oga
53. Meeqo jeer baa wazaaradu qiimeeysay hay’ad banaanka ka timid? Marna sanadki hore
54. Meeqo jeer baa wazaaradu lagu sameeyay qiimeeyn oo ay samaysay urur banaanka ahi? Marna sanadki hore
55. Waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn aa ay arkeen ururadaan banaanka ka yimid oo wazaaradu qiimeeyay? M/Q
J. Dacweynta gudaha dadka jabiyo shuruuc hoosaadka akhlaaqda
56. Ma jiraa wadooyin la ogyahay oo loo maro marki la dacweynayo shaqsi jabiyay amaanada ama shuruuc hoosadka amaanada oo lagu dacweyo sarkaal u taagan shaqadaa? Maya
57. Hadii sarkaalka u taagan in dacwo loo keeno uu yahay qofka la dacweynayo, ma jiraa wado kale ee dacwada loo mari karo in la geeyo? Maya
58. tababar malagu siiyaa wadooyinkan iyo shaqsiyaadka laga rabo in ay dacwooyinka u geeyaan? Maya
59. Ma jiraa qaab lagu badbaadinayo kuwa soo sheega dhaqan xumi si aanan looga aar gudan? Maya
60. Meeqo dacwado bay shaqaaluhu keeneen 12ki bil ee u dambeysay iyo maxay aheyd natiijooyinkooda (kan dacwada keenay iyo kan la dacweeyayba) Ma jirin wax dacwado ahi maadaama aysan jirin qof loo dacwoodo ama badbaado la siinayo qofki dacwada keena.
K. Ashtakada ka timaada shacabka
61. Ma jiraan wadooyin cad ay muwaadiniintu dacwo ka keeni karaan wazaaradu ama shaqaalaha wazaaradu? Maya
62. Xagee laga heli karaa meel ay ku xusanyihiin wadooyinka loo marayo dacwada ka dhanka ah wazaarada ama shaqaalaheeda? M/Q
63. Hadii ay jirto, go’aamada ku aadan dacwadaha ma waxaa qaadanayo qofki ama qeybti dacwada laga keenay? M/Q
64. Meeqo dacwado ayay wazaaradu heshay sanadkii hore? Lama Oga
65. Meeqo dacwo bay cadaatay in ay ku salaysnaayeen xaqiiq? Lama oga
L. Ciqaabeynta iyo go’aan ka gaarida kuwa laga ashtakooday
66. Meeqo shaqaale baa la hor keenay guddi qaabilsan disipliinka si loo eego in ay ku keceen arrimo jebinayo shuruuc hoosaadka akhlaaqda? Midna
67. Meeqo kamid ah fadhiyada disiplinka baa ku dhamaaday iyada oo go’aan laga qaatay shaqsigi ashtakada laga keenay? M/Q
68. Waa maxay go’aamada laga qaatay shaqaalaha laga keenay ashtakadu? M/Q
M.Qeybaha ugu nugul in dhaqan xumi ka dhaco
69. Ma sheegi kartaa qaybaha ama shaqooyinka wazaaradan ee ugu nugul in ay ka dhacaan dhaqan xumi? Xafiiska agaasimaha guud, hogaanka socdaalka, iyo barnaamijki dhaqan celinta kuwi ka soo goostay Shabaabka
70. Malaga sameeyay wazaarada baaritaan qaybaha ugu qatar badan in lagu dhaqan xumoodo wazaaradu? Maya
71. Qorshaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee wazaaradu ma qaadanaa tilaabooyin lagu saxayo arrintaan? Ma lahan wazaaradu qorshe la dagaalan musuqmaasuq
N. Siyaasadaha la dagaalanka musuqmaasuqa
72. Yaa waayay cida wazaarada ka tirsan ee shaqadiisu tahay dhaqan gelinta, la socodka, xiriirinta, iyo sameynta siyaasad la dagaalanka musuqmaasuqa? Qofna
73. Mas’uuliyadaan maku cadahay qeexida shaqadiisa (eeg su’’asha 4)? M/Q
74. Ma jiraa koox shaqo ee wazaarada ka tirsan ee u xil saran sameynta, isku xirka, la socodka, iyo ka warbixinta siyaasad la dagaaln musuqmaasuqeed? Maya
75. Meeqo jeer bay kulantaa kooxdaan? M/Q
Keydad bangi. Nala soo xiriir hadaa doonto inaad aragto keydadkani.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Seteembar 28, 2013 uu qoray Maxamed Mubarak.